router သုံးချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
April 2009 edited April 2009 in Networking
ROUTER သုံချင်လို့ပါ ။ မော်ဒယ် က DI-624+(D-LINK) ပါ။ ကျွန်တော် link လုပ်တာ ရတော့ရပါတယ်။
ဒါပင်မဲ့ internet သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာ။ လမ်းညွန်ပေးကြပါ...
router ရဲ့ wan configuration ကို ISP ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း မှန် မမှန်ပြန်စစ်ကြည့်ပါလား။ lan configuration ကို default အတိုင်းထားသုံးကြည့်ပါ။ ဘာ service သုံးတာလဲ၊ MPT လား၊ Bagan လား ပြောပေးပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ :67:
I think you should ask first how to configure when u buy. If possible first ask your shop for help.
router ရဲ့ wan configuration ကို ISP
ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း မှန် မမှန်ပြန်စစ်ကြည့်ပါလား။ lan configuration ကို default အတိုင်းထားသုံးကြည့်ပါ။ ဘာ service သုံးတာလဲ၊ MPT လား၊ Bagan လား ပြောပေးပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ :67:
WAN connection နေရာမှာ bagan ISP ရဲ့ static ip နဲ့ DNS တွေထည့်ပါ ပြီးရင် local ip မှာ DHCP ပေပြီးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါလား...အစဉ်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်....:106::106::106:
ပုဂံဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ် သေသေချာချာပြန်စစ်လိုက်နော်။ အောင်မြင်ပါစေဗျာ :d